टेस्ट सिरिजः भारतलाई तेस्रो झड्का, कप्तान कोहली शून्यमै आउट ! - Everest Dainik - News from Nepal
टेस्ट सिरिजः भारतलाई तेस्रो झड्का, कप्तान कोहली शून्यमै आउट !
काठमाडौंः बंगलादेश विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेट सिरिजको पहिलो इनिङ्समा भारतले सस्तैमा ३ विकेट गुमाएको छ ।
खेलको पहिलो दिनमा एक विकेट मात्र गुमाएको भारतले दोस्रो दिनको सुरुवातमै थप २ विकेट गुमाएको छ ।
भारतले तेस्रो विकेटका रुपमा कप्तान विराट कोहलीलाई शून्य रनमै गुमाएको छ । उनलाई बंगलादेशका अव जायदले ३१ ओभरकाे पाँचौ बलमा एल्बीडब्लू आउट गर्न सफल भए ।
याे पनि पढ्नुस भारतसँगको टी–२० सिरिज खेल्न बंगलादेशद्वारा टिम घोषणा
भारतले यसअघि रोहित शर्मालाई ६ र चेतेश्वर पुजारालाइए ५४ रनमा गुमाई सकेको छ । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको बंगलादेशले पहिलो इनिङ्समा ५८.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ५० रन मात्र बनाउन सक्यो ।
उसका लागि मुस्फिकुर रहिमले सर्बाधिक ४३ रन बनाए । बंगलादेश र भारतबीचको यो सिरिज भारतको इन्दोरमा भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः भारतविरुद्ध टस जितेर बलिङ गर्दै बंगलादेश
ट्याग्स: टेस्ट क्रिकेट सिरिज, भारत भर्सेस बंगलादेश